Banyere KAIGUAN | Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Changzhou Kaiguan Packaging Technology Co., Ltd.
Changzhou Kaiguan Packaging & Technology Co., Ltd dị na Changzhou City, Jiangsu Province, China. Ọ dị n'etiti ọdọ mmiri Yangtze nke China mepere emepe nke ọma nwere njem njem dị mma yana gburugburu ngwa ngwa dị elu. Anyị bụ ụlọ ọrụ teknụzụ nkeonwe nke ọkachamara nwere ahụmịhe bara ụba na imewe, mmepe, na-emepụta ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa na-agbanwe agbanwe.
Anyị na-anakwere teknụzụ dị elu n'ụwa, na-eji ihe nchebe gburugburu ebe obibi, na-emepụta teknụzụ mmepụta nke ngwaahịa mkpọ mkpuchi gburugburu ebe obibi ọhụrụ.
KAIGUAN-emeputa ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa
Afọ 12 nke ahụmahụ na ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa gburugburu ebe obibi
Ike nhazi ọkaibe maka ụlọ ọrụ ngwa gị akọwapụtara
Ụlọ ọrụ anyị nwere njikwa siri ike na njikọ ọ bụla nke ngwaahịa ngwaahịa site na mmalite. anyị na-achụso ogologo oge na mmekọrịta kwụsiri ike nke imekọ ihe ọnụ na ndị ahịa, na-etinye mgbalị iji mee ka ụlọ ọrụ ahụ nweta mmepe ogologo oge.
Site na omume mepere emepe na ezi obi, anyị na-atụ anya ndị enyi niile inwe nkwurịta okwu na nyocha na ụlọ ọrụ anyị, na-enye ozi ha chọrọ ma na-enyere ha aka idozi nsogbu imewe.
Audit ndị ahịa
Anyị na-atụ anya iguzobe mmekọrịta ogologo oge na ndị ọrụ niile maka ọdịnihu dị mma!
Họrọ Kaiguan, họrọ mma!
Kaiguan- sonyere na ihe ngosi ahụ nke ọma!
Ndị ahịa 'mkpa na aro bụ ikike ịnya ụgbọ ala anyị, afọ ojuju ndị ahịa bụ nchụso anyị.
Anyị na-atụ anya ugbu a ka anyị na ndị ahịa si mba ofesi na-emekọ ihe ọnụ dabere na uru ọ bụla.